10 Tilmaamood oo laysku waafajinayo Emailkaaga Suuqgeynta iyo Warbaahinta Bulshada
Sabtida, Juun 16, 2016 Jimco, Juun 15, 2016 Douglas Karr
Haddii aad muddo akhriste ka ahayd daabacaaddan, waad ogtahay sida aan u yasayo emaylka iyo doodaha warbaahinta bulshada. Si loo sii daayo awoodda buuxda ee istiraatiijiyad kasta oo suuq-geyn ah, isku-habeynta ololayaashaas kanaalka oo dhan waxay sare u qaadi doontaa natiijooyinkaaga. Maaha su’aal lidi ku ah, waa su’aal iyo. Olole kasta kanaal walba, sidee ku xaqiijin kartaa kororka qiimaha jawaabaha ee kanaal kasta oo aad heli karto. Iimayl? Bulsho? Ama
Saxiix: Ku kori Email, Qoraal, Bulsho iyo Sharafta
BrightTag, oo ah barxad suuqgeyn ku saleysan daruur oo loogu talagalay dukaamada internetka, ayaa iibsatay Signal. Signal waa xarun suuq-geyn u ah suuq-geynta suuq-geynta kanaalka iyada oo loo marayo emayl, SMS iyo warbaahinta bulshada. Astaamaha calaamadaha waxaa ka mid ah: Wargeysyada emaylka - horay loo sii dhisay, moobiillada emayl-ku habboon ee moobiilka lagu isticmaalo ama aad adigu sameysato Farriinta qoraalka - bilow barnaamij wax ku ool ah oo u hoggaansanaanta shuruudaha gudbiyaha mobilada. Daabacaadda warbaahinta bulshada - ku daabac xaaladdaada Facebook iyo Twitter, adoo adeegsanaya URL gaagaaban si aad ula socoto waxyaabahaaga.
Dhammaadka Emailka Dhammaadka ah 'Unroll.me'
Axad, Juun 30, 2013 Douglas Karr
Dhowrkii biloodba mar, waxaan u baahanahay inaan dhex maro emaylkeyga oo aan bilaabo kala sifeynta qashinka oo dhan. Laga soo bilaabo barxadaha aan tijaabiyay, ogeysiisyada bulshada iyo joornaalada - sanduuqa sanduuqa ayaa ku jira. Waxaan isticmaalayaa aalado aad u fiican si aan uga caawiyo maamulkiisa, sida Mailstrom, laakiin wali xoogaa waa laga xakameeyaa. Unroll.me waxay halkan u joogtaa inay kaa caawiso inaad dib u soo ceshato xakameynta sanduuqaaga. Halkii aad ka heli lahayd emayllo badan oo isdiiwaangelin ah maalintii oo dhan, waxaad heli kartaa mid keliya.
Nidaamyada Maamulka Diiwaangelinta: CheddarGetter
Sabtida, Diisambar 19, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan waxaan qaatay inaan waqti la qaato kooxda Sproutbox, oo ah qalab farsameeyaha cajiibka ah ee Bloomington, Indiana. Sproutbox waxaa aasaasay qaar ka mid ah dadka wax soo saara oo aqoonyahanno ah kuwaasoo go'aansaday waxa ay jecel yihiin iyo waxa ay ku fiicnaayeen inay fikrad qaataan oo ay suuqa u keenaan xal ahaan. Waxay taas u sameeyaan si sinnaan ah mashaariicda ay go'aansadaan inay u qaadaan suuqa. Waxaan maanta kaqeyb galay finalka finalka soo socda ro the
Sida loo dejiyo Filashooyinka Macaamiisha ee Emailka iyo GUUL!
Talaado, September 29, 2009 Saturday, April 16, 2016 Scott Hardigree
Macaamiishaada emailkaagu ma riixayaan boggagaaga internetka, ma dalbanayaan alaabadaada, ama diiwaangelinta dhacdooyinkaaga, sida la filayo? Maya? Taabadalkeed ma yihiin kuwo si fudud aan jawaab uhelin, diiwaan gelin la'aan ama (gaas) cabanaya? Hadday sidaas tahay, laga yaabee inaadan si cad u aasaaseynin wax wada qabsi ah.